Iyiphi indima edlalwa yimisebe ephuzi ku- “Love and Light”? - Mytika Speak
Ikhaya / Ibhalansi kanye neGrey / Iyiphi indima edlalwa yimisebe ephuzi ku- “Love and Light”?
I-ray ephuzi ixhunyaniswe ngqo noMthombo futhi iyisisekelo se- "Uthando Nokukhanya".
Njalo ray inendima eyehlukile kanti i-ray ephuzi isesisekelweni sayo yonke imisebe. Lokhu kungenxa yokuthi imisebe ngayinye ngeke ibekhona ngaphandle kokukhanya futhi bebengeke badonsekele enjabulweni yabo ngamanye ngaphandle kwamandla ukuthanda. Imisebe ngayinye isebenzisa “Uthando Nokukhanya” ku izindlela ezijabulisayo ezihlukile.
Isibonelo, ngaphandle kwe-ray ephuzi, i-ray eluhlaza ngeke ithande ukuxhuma nokudlidliza. Ngaphandle kokukhanya imisebe eluhlaza yayingakwazi ukuba khona.
Izindima zomuntu ngamunye zemisebe ngayinye:
I-Purple Ray - Ngaphandle kwe-ray ebomvu, abantu bebengeke ukwazi indlela yokufunda.
IBlue Ray - Ngaphandle kwemisebe eluhlaza okwesibhakabhaka, abantu bebengantula ukuzimisela.
IGreen Ray - Ngaphandle kwe-ray eluhlaza, abantu bebengeke bazizwe benamandla vibration.
I-Orange Ray - Ngaphandle kwemisebe ewolintshi, impilo ibizobe ingekho isisusa.
I-Pink Ray - Ngaphandle kwe-pink ray, abantu abasoze bazizwa ungaqiniseki, ibavimbela ekubuzeni nasekuphikeleleni.
I-Red Ray - Ngaphandle kwe-ray ebomvu, impilo ibingantuleka uthando nenjabulo.
Okuphuzi kimi kusho uthando nokukhanya
Ngiyigcina isondele ngiyibambe ngqi
Ngiyibona ikhanya ngemisebe ekhanya kakhulu
Ukungifudumeza ebusuku obumnyama obubandayo
Kungigcwalisa ngokulawula impi yami
Ngokuyisimangaliso uphendulela amaphutha emalungelweni
Ivula amehlo ami futhi ivuselele ukubona kwami
Ukugcwalisa inhliziyo yami ngenjabulo emsulwa
Amathegiukuqonda uthando nokukhanya ukukhula komuntu siqu izinkondlo ingokomoya imisebe ephuzi